Mogadishu Journal » Booliska Indonesia oo toogtay 4 Nin midna Gacanta ku dhigay
Mjournal :-Ciidamada booliska dalka Indonesia ayaa toogtay Afar oo ay sheegeen in ay Weerar kusoo qaadeen Saldhig ay leeyihiin Ciidamada Booliska dalkaasi.
Falkaan ayaa ka dhacay Saldhigga ciidamada Booliska ee Jasiiradda Sumatra.
Afhayeenka Ciidamada Booliska gobolka ayaa sheegay in shan ruux oo gaari wadatay ay gudaha usoo galeen Saldhigga,islamarkana inta aysan xabad bilaabin in la toogtay Afar ka mid ah midna gacanta lagu soo dhigay.
Dalka Indonesia ayaa ku jira Xaalad adag , ka dib markii ay ka dhaceen Weeraro badan oo ay Mas’uuliyadooda sheegteen Kooxda Daacish.
Weerarka saaka oo Arboco ah ka dhacay Jasiiradda Sumatra waxaa uu yimid kaddib markii todobaadkan labo weerar lagu qaaday Kaniisado iyo Saldhig Boolis oo ku yaalla Magaalada 2aad ee ugu Weyn Indonesia ee Surabaya.